ပြောချင်တော့ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ပြောချင်တော့ဘူး
Posted by naywoon ni on Mar 17, 2012 in Poetry | 16 comments
၀မ်းရေး ….၀မ်းရေး ….၀မ်းရေး…ဗျ
တစ်ကယ် နွားမှတ်လို့ အသားပေါ်ရောင်းမိဦးမယ်
အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ် ဆိုတာလဲ ရှိတာကလားဗျ ။
ဘဝဟာ ဂိမ်းတစ်ခုဆိုလဲ နောက်တစ်ခန်း သွားရမှာဘဲ….
အူအတောင့်မှ သီလစောင့်တယဆိုပေမဲ့ ၀မ်းဝရုံလေးတင်ရယ် ….။ အဟာရဖြစ်မဲ့ အဆီအနှစ်မပါဘူးဆိုရင်ကော …. အဲဒိသီလ ဆိုတာစောင့်နိုင်ပါမလား…။ ဗိုက်တော့ပြည့်နေတယ်…။ ပါးစပ်က စားချင်သောက်ချင်တဲ့ အာသီသ မပြေဘူးကွာ…။ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာလည်း အစာကအဟာရနဲ့ အားထွက်ပြီးလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး …..။ အရိုးထဲက အားကိုညှစ်ထုတ်ပြီးလုပ်နေရတာ…။ အဲဒိလိုလူတွေ အနားမှာအများကြီးရှိတယ်…။ အဲဒါကိုပြောချင်တာပါမောင်ပေ………..။
“ဗိုက်တော့ပြည့်နေတယ်…။ ((ပါးစပ်က စားချင်သောက်ချင်တဲ့ အာသီသ မပြေဘူးကွာ))…။”
မပြောချင်ပေမဲ့လဲ ပြောမှသိ၊ တီးမှမြည် မှာမို့ ပြောသာပြောပါရှင်။
ပြောချင်တော့ဘူး ဆိုတာ ပြောပြီးသွားပြီလေ။
ဟုတ်ပ… မမရေ…။ ပြောချင်တာတွေပြောပြီးကာမှ မပြောချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်…။
ဆူးရေ……. ပျဉ်းမနားမှာအရင်လို မျှစ်မပေါတော့ပါဘူးကွယ်…။ တောပြုန်းပြီး ဘယ်နားသွားချိုးရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး…။ အရင်လိုတောထဲတောင်ထဲ သွားချင်ရာသွားလို့လည်းမရတော့ပါဘူး…။ ဘယ်နေရာက ဘယ်မြို့နယ်ထဲပါသလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှအတိအကျမသိကြတော့ဘူး…။
ပျဉ်းမနား မျှစ်ချဉ်ကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ် ၀ါးပိုးအမျိုးကို ချိုးလို့နဲ့တူတယ်။ မျှစ် အတုံးကြီးပေမဲ့ နူးညံ့ပြီး အိတယ်။
အော်..မပြောမပြီး မတီးမမည် တဲ့
တစ်ကယ် နွားမှတ်လို့ အသားပေါ်ရောင်းနေမှာ
သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတထွာလို့ ဆိုရိုးစကားရှိတာမဟုတ်လား ဦးနီရဲ့၊ အဆင်ပြေသွားမှာပါ…
ပြောချင်တော့ဘူးဆိုလဲ ပြောနဲ့တော့လေ ဦးနီရဲ့ ဟဲဟဲ နောက်တာနော် မလွယ်ပါဘူး ၀မ်းကတစ်ထွာမို့လို့သာ ၂ထွာသာဆို ညတောင်အိပ်ရမယ်မထင်ဘူး မတွေးရဲဘူး
ပညာမတတ်လို့ ဆင်းရဲရ …။ ပညာကသင်ရမဲ့အချိန်မှာ ဟိုဟာမရှိဒါမရှိ…။ ရှိတာလေးနဲ့ တတ်သလောက်လေးနဲ့ ၀မ်းစာရှာ …။ အဲဒိတော့ အဟာရပြည့်အောင်မစားနိုင် စားနိုင်အောင် ပညာထပ်သင်မယ်ဆိုတော့ ၀မ်းရေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူမရှိ …။ မရှိသံသရာလည်နေတဲ့ဘ၀ အဲဒါ မြန်ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀အမှန်ပဲ…။ တွေ့ပြီလား မြင်ပြီလား မြင်အောင်ကြည့်သွား…။ အာာာာာာာာာာားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး